काठमाडौं आएको अमेरिकी सेनाको जहाजले के-के ल्याएको थियो ? — Imandarmedia.com
काठमाडौं आएको अमेरिकी सेनाको जहाजले के-के ल्याएको थियो ?
काठमाडौं। शुक्रबार बिहान काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको अमेरिकी वायु सेनाको विमान कूटनैतिक प्रयोजनको लागि आएको बताइएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका सूचना अधिकृत खेमराज उपाध्यायले अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई लिएर युएस एयरफोर्सको जहाज काठमाडौं आएको बताए।
विमान शुक्रबार बिहान सवा ९ बजे काठमाडौंमा अवतरण गरेको थियो। यो विमानमा कूटनीतिज्ञसहित सामानहरु पनि भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार युएस एयरफोर्सको आरसीएन १८१६ चार्टर्ड विमान काठमाडौंमा बिहान सवा ९ बजेको समयमा अवतरण गरेको थियो।
अमेरिकाबाट उडेपछि यो विमान पहिले थाइल्याण्डको बैंकक गएर त्यहाँबाट काठमाडौं आएको हो। उक्त विमानले कूटनैतिक प्रयोजनका सामान लिएर आएको बताइएको छ।
विमानले १२०० किलोग्राम बराबर ३३ वटा प्याकेजहरु लिएर आएको थियो। ती सामानहरु नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासका प्रतिनिधिले बुझिलगेका छन्।
एमसीसी पास भएसंगै नेपालमा उक्त जहाज आउनु सोहि परियोजनासंग जोडिएको भन्दै चर्चा सुरु भएको छ । एमसीसी खारेजीको माग पनि बढेको छ तर सरकारले भने कार्यान्वयनको बाटोतर्फ सम्झौता अघि बढाउने तयारी थालेको छ।
केहि साना कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एमसीसी खारेज हुनुपर्ने बताउदै आएका छन् ।भित्र सदन अवरुद्ध अनि बाहिर सडक तनावग्रस्तबीच गत फागुन राति ९ बजे संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएको थियो ।
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जब मुलुकका लागि राष्ट्रघात छ भनेर हजारौं नेपाली जनता माइतीघर र नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दिनहुँजसो विरोध जनाएर आन्दोलन गरिरहेका भे पनि आखिर सत्तारूढ दलहरूले एमसीसी अनुमोदन गराइछाडे ।
संसद्मा सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजीबीच एमसीसीको व्याख्यात्मक बहस चलिरहेको थियो । संसद्मा विभिन्न सांसदहरूले बोल्ने क्रममा कसैले एमसीसीको विषयमा आजसम्म पनि राम्ररी बुझेका छैनन् भने कसैले एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनेका छन् त कसैले एमसीसी विकास परियोजनाको साझेदार हो, यो मुलुकका लागि हित छ भनेका थिए।
आन्दोलनकारीलाई तितरबितर पारेसँगै आन्दोलनकारीहरूले सडकका पेटीको ब्लक निकालेर प्रहरीलाई हाने, इँटा–ढुङ्गाले हाने प्रहरीले पनि भाटा र केही अश्रुग्यास, पानीको फोहरा हानेको थियो भने आन्दोलन पक्ष र प्रहरी दुवै तर्फबाट दर्जनौं घाइते भएका थिए ।
त्यस दिन तनावग्रस्तै बन्यो बानेश्वर ।फागुन १२ गते पनि उस्तै सुरक्षा कडा पारेको थियो। बिहान ११ बजेदेखि विभिन्न राजनीतिक दल एमसीसीविरुद्धमा उत्रेका अगुवाइहरूको विरोध जुलुसले बानेश्वर तातेको थियो
उता प्रहरीले सुरक्षा घेरा कडा बनाएको थियो । नभन्दै ८ गतेको जस्तै परिस्थिति फेरि फागुन १५ गते आइतबार दोहोरियो। प्रहरीले लाठीचार्ज, रबर गोलीदेखि अश्रुग्यास पानीको फोहरा हानेका थिए । भीड तितरबितर भयो, आन्दोलनकारीले प्रहरीलाई गुलेलीले समेत हिर्काए।